"Waxay Ahaayeen Sidii Kuwo Tababar Samaynaya" - Cesc Fabregas Oo Saluugay Horyaalka Bundesliga - Gool24.Net
“Waxay Ahaayeen Sidii Kuwo Tababar Samaynaya” – Cesc Fabregas Oo Saluugay Horyaalka Bundesliga
Tartanka horyaalka Bundesliga ee waddanka Jarmalka ee dib u bilaabmay shalay, macno badan uma samaynin xiddigii hore ee Arsenal iyo xulka Spain ee Cesc Fabregas, haddana u ciyaara AS Monaco, sababtuna waa inuu dareemayay sidii ay ciyaartoydu samaynayaan tababar.
Horyaalka heerka koowaad ee Bundesliga iyo midka heerka labaad ayaa Sabtidii shalay dib u bilaabmay, waxaana shalay la daawaday shan kulan oo horyaalka heerka koowaad ah, halka laba kulan oo ay ka mid tahay Bayern Munich ay maanta dhici doonaan, ciyaarta ugu dambaysa usbuucanna ay berri ballanteedu tahay.
Borussia Dortmund iyo Schalke 04 oo kulankoodu ahaa midka aadka looga daawaday dunida oo dhan, ayaa waxa kasoo baxday natiijo weyn oo ahayd 4-0 ay BVB guushu ku raacday, waxaana mid ka mid ah goolasha dhaliyey Erling Haaland oo sidoo kale raacay sharciga kala-fogaanshaha bulshada.
Fabregas oo ka mid ahaa dadkii malaayiinta ahaa ee daawaday kulamada shalay, ayaa waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay in haba-yaraatee aanay ciyaarahaasi aanay ka duwanayn sidii ciyaartooyo tababar samaynaya.
Cesc waxa uu ku dooday in hadalka ciyaartoyda iyo tababareyaasha si toos ah loo maqlayay, taasina muujinayso qaybta weyn ee ay taageereyaashu ka yihiin ciyaaraha.
“Waxay u ekayd sidii aan daawanayay tababar.” Ayuu Fabregas ku yidhi qoraalkiisa, waxaanu intaas raaciyey: “Waxaad maqli karaysaa dhamaan ciyaartoyda iyo tababareyaasha qayladooda. Hadda waxaynu qiimayn doonaa awoodda taageereyaasha in kasii badan intii hore.”